Filipina: Fanambaràna ireo ‘disques durs’ any amin’ny cyber-cafe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2010 4:12 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Català, македонски, বাংলা, polski, Español, English
Vao haingana izay ny Phillipine Optical Media Board (OMB) no nanome hevitra ny hitakiana amin'ireo mpitàna ireny cyber-café ireny mba hanao fanambaràna ireo “disques durs” ao amin'ny solosain'izy ireo. Raha ny voalazan'ny OMB, dia isan'ny mahatonga ireo “disques durs” ho eo ambanin'ny fanaraha-mason'ny OMB ny fisian'ireo fangaron-javatra ‘magnetics’ [Avy amin'ny mpandika: miteraka onja electomagnetique angamba] ao anatiny, araka ny lalànan'ny Optical Media tamin'ny 2003 .
Ny fikambanan'ireo mpitantana cyber-café Filipiana dia manohitra ity tolo-kevitra mitaky fanaoana fanambaràna ny ‘disque durs’ ity ary nanambara fa “hitondra ny indostria ICT hiverina any amin'ny taonan'ny ranomandry izany.”
JC John Sese Cuneta, nitsikera tao amin'ny blaogy Azrael's Maryland fa kentrina ity tolo-kevitra ity, ary mampiseho ny filàna ireo mpanao politika mahalala mikasika ny teknolojia avo lenta mandritra ny fifidianana nasionaly:
[Ity] dia mampiseho antsika ny filàna te-hahafantatra hoe iza amin'ireo mpifaninana no tena mahalala mikasika ny Teknolojia sy ny aterineto, mba hahafahantsika mifidy azy ireo. Zavatra mifampitohitohy ity, raha mifidy ireo mpifaninana tsy mahalala mikasika ny teknolojia sy ny aterineto isika, dia lasan'ireo olona tsy mahalala na inona na inona mikasika izany ireo toerana ireo.
Ao amin'iny resaka iny ihany, nanakiana ity tolo-kevitra ity ohatran'ny fomba iray hafa hahazoan'ny Governemanta vola i Ka_fredo:
Politika tsy manjary iray hafa ataon'ireo mpisam-panjakana heverintsika ho tsy mahalala mikasika ny teknolojia izay notendren'ny filoha ity. Fomba hafa ho azy ireo mitery |Avy amin’ ny mpandika: mitery, toy ny mitery ronono] ireo mpitantana café madinika ity. Raha tokony hitady fomba hisamborana ireo mpandika lalàna ry zareo, dia aleony mamorona loharanom-bola vaovao azo ampiasaina hanaovana kolikoly.
Ny parlemanteran'i Filipina sy ny mpamoaka lahatsoratry ny GVO, Mong Palatino dia nampitandrina ihany koa fa “mety hampiasaina hanosihosena ny zon'ny olona sy ny fiainany manokana ity tolo-kevitra ity manoloana ny fikarohana sy ireo fitànana tsy ara-dalàna.”
“Nyfiheverana fa hoe ny OMB dia ho afakka manana fidirana amin'ireo ‘disques durs’-n'ireo olona manokana dia mazava fa fandikàna ny lalàm-panorenana. Mitovy amin'ny famelanao ny lalimoaranao ho eo ambany fiadidian'ny Governemanta izany,” hoy Palatino.
Ny fahazoan'ny OMB mijery ny ao anatin'ireo fitaovana misy ireo tahiry rehetra, hoy Palatino, dia mampiharihary aminy ireo “fichiers” manokan'ireo tompon'ny solosaina rehetra.
Ity tolo-kevitra ity dia manainga fanontaniana hafa ho an'ny Owning a Cafe:
Ho an'ireo mampiasa fandikàna CD sy DVD ao amin'ny cyber-cafe-n'izy ireo, dia tena olana be ny fanaovana fanambaràna ireo entana ireo any amin'ny OMB satria tsy mety atao izany raha tsy any amin'ny biraon'izy ireo any Quezon City, Metro Manila. Manontany tena ny amin'izay mety hatao amin'ny fanoratana ireo ‘disques durs’ aho? Ny fanontaniako izay hafa ihany koa dia hoe ireo cyber-cafe ihany ve no mila manoratra ireo disques durs-ny? Ahoana ihany koa ny momba ireo orinasa sy ireo toeram-piasana hafa izay mampiasa solosaina misy ‘disques durs’ any amin'izy ireo?